Maalinta: Maarso 14, 2017
Jooji Qaar ka mid ah Jidadka Madaarka ee New York
Qaar ka mid ah Safarada Magaalada ee New York Cancel: Toddobaad ka hor bilowga gu'ga, New York waxay isu diyaarinayaan duufaanta la filayo inay faa'iidada ugu badan keento xilliga qaboobaha. Marka loo eego warbixinnada saadaasha hawada ee ku saabsan barafka 40 cm [More ...]
Adeegga Gawaarida Magaalada ee Kahramankart: Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn waxay soo bandhigtay codsi wareega kahramankart si loo helo adeeg tayo wanaagsan oo gaadiidleyda dadweynaha ah. Kahramankart Magaaladu waxay kaxaystaa barnaamijka moobiilka ee Android [More ...]
Codsiga Gaadiidka Gaadiidka Dadweynaha Moovit Hadda oo ku yaala Adana
Hoggaaminta Codsiga Gaadiidka Dadweynaha Moovit wuxuu hadda ku jiraa Adana: Codsiga gaadiidka #1 ee adduunka ee dadweynaha ayaa bilaabay Moovit Adana. Hadda, kuwa doorbida gaadiidka dadweynaha ee Adana, iyagoo adeegsanaya arjiga Moovit ee bilaashka ah magaalooyinkooda si aan xasilloonayn [More ...]
Jidadka cusub ee gaadiidka dadweynaha ee Diyarbakır waxaa la go'aamiyay: Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, iyadoo la tixraacayo baahida muwaadiniinta, degmooyinka miyiga ee degmada Bağlar, biyo kuleylka kuleylka degmada Çermik iyo xarumaha dowladda ee loogu talagalay gaadiidka cusub ee dadweynaha. [More ...]
Tram laga soo bilaabo Eyüp ilaa Eminönü
Imaatinka Imaatinka Eminönü ilaa Eyüp: Maalgashiga Magaalo Xeebeedka Istambul ee Eyüp waa la furay. Duqa Magaalada Caadi ee Kadir Topbarald, wuxuu shaaca ka qaaday in khadka tareenka laga dhisi doono Eminönü ilaa Eyüp uuna ka gudbi doono xeebta xeebta. [More ...]
4 Khadadka Kala Duwan ee Xallinta Dhibaatooyinka
4 Separate Metro to Arnavutköy, oo dhibaatadiisa la xalliyey: Munaasabad ballaaran oo furitaan ah oo ay ka qeybqaadanayaan duqa magaalada Kadir Topbaş ee maalgashiga wadarta ah ee 94 milyan oo Pound ay sameeyeen Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ee Arnavuktöy. [More ...]
Xeerarka DHMİ ee Dhiirrigelinta Waajibaadka ayaa la shaaciyey: 18.10.2016 dhinaca 28. Qodobka “Kor u qaadista Maareeyaha Laanta, Madaxa iyo Shaqaalaha Khabiirada ah [More ...]
Nidaamyada Gaadiidka Sirdoonka ee IETT: IETT waxay ku guuleysatay Akıllı Nidaamka Gaadiidka Sirdoonka Guusha Hay'adda Ulaitutiontırma ee Guddiyada Gaadiidka iyo Bandhigga Abaalmarinta oo ay soo qaban qaabiyeen Naadiga Kabtanka. Macluumaadka horumarsan iyo tikniyoolajiyada isgaarsiinta ee taageeraya gaadiidka [More ...]
Adeegga Wifi ee baska ee Kocaeli ayaa soo jiidata muwaadiniinta
Adeegga Wifi ee baska Kocaeli wuxuu soo jiitaa dareenka muwaadin: Kocaeli Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalo Weynta A.Ş. Thanks to wifi, rakaabku waxay gali karaan internetka oo ay shaqada qaban karaan. [More ...]
Wax ka badalida TCDD Cadres Waxaa lagu daabacay Gazette Rasmi ah: Go'aanka ku saabsan isbadalka lagu sameeyo cadadka TCDD waxaa lagu soo daabacay joornaalka rasmiga ah ee taariikhaysan bisha Maarso 11. Go'aanka isbeddelada shaqaalaha TCDD 2017 Maarso 11 [More ...]
Goobta gawaarida waxaa lagu sameeyaa khadka tareenka Akçaray: Shaqooyinka dhirta ayaa sii soconaya khadka Akbariga, kaas oo si dhaqso ah looga dhisay degmada Kocaeli. Marka la eego macnaha guud, shaqooyinka dhirta waxaa lagu sameeyaa qadka. [More ...]
Jaridda Geed-goynta, Goynta iyo Goynta waxaa laga Qaadi doonaa Iibsashada Mas'uulka Sare ee Mashruuca Dejinta Tareenka Korantada Qaranka (TÜVASAŞ) (Tender Ceyriyey) Bogie Shaqo-joojinta Shaqo joojinta ee Mashruuca Dejinta Korantada Korantada Qaranka [More ...]
Qabsashada nidaamyada tareenka ayaa dib loo dhigayaa
Aqoon isweydaarsiga nidaamka tareenka ayaa dib loo bilaabi doonaa: Kulan Macluumaadka Macluumaadka Tareenka Nidaamka Tareenka ayaa la qabtay. Isagoo ka hadlayey kulanka, Agaasimaha Guud ee Tacliinta farsamada Cusmaan Nuura Gülay wuxuu sheegay in dowladdu ay ahmiyad weyn siineyso gaadiidka ee nidaamka tareenka waxuuna yiri, “ [More ...]
3. tiknoolojiyada gaarka ah ee rakaabka ee garoonka diyaaradaha
Teknolojiyad khaas ah oo loogu talagalay rakaabka garoonka diyaaradaha: Madaarka cusub, ama garoonka diyaaradaha saddexaad, oo dhismihiisa ka socdo Istaanbuul, wuxuu raaxada siin doonaa rakaabka isagoo toos u siinaya tikniyoolajiyadda loo adeegsaday. Turkey ee Ataturk tilmaamay albaab u dunida [More ...]